Sakafo eritreretina - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Jesosy dia nilaza fa hahatsiaro Azy isaky ny manatona ny latabatry ny Tompo isika. Tany am-piandohana dia fotoana mangina sy matotra ho ahy ny fanasan’ny Tompo. Nahasorena ahy ny niresaka tamin’ny olon-kafa talohan’ny na taorian’ilay lanonana satria niezaka nitazona ilay fankalazana aho. Na dia tsaroantsika aza i Jesosy, izay maty fotoana fohy taorian’ny nizarany ny sakafo hariva farany tamin’ny namany, dia tsy tokony horaisina toy ny…
Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, ka tanteraho rehefa azoko izany ary manomboka indray aho satria tsy manao izany tsara ...
Betsaka ny olona mandeha matetika no mahatadidy ireo tsangambato malaza ho fisongadinan'ny diany. Maka sary ianao, manamboatra rakitsary sary na manamboatra azy ireo. Notantarain'izy ireo tamin'ny namany sy ny havany ny zavatra hitany sy niainany. Hafa ny zanako lahy. Ho azy dia ny sakafo no misongadina amin'ny diany. Azony atao ny mamaritra tsara ny làlan'ny sakafo hariva rehetra. Tena mankafy sakafo matsiro izy. Ianao dia afaka…
Ny ankamaroantsika dia namaky Baiboly, nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-teny mahazatra ary aforeto ao anaty azy ireo toy ny bodofotsy mafana izy ireo. Mety hitranga ny fianarantsika mahazatra satria mahatonga antsika tsy hijery zavatra. Raha mamaky azy ireo amin'ny masony malalaka isika ary avy amin'ny fomba fijery vaovao dia afaka manampy antsika hahafantatra bebe kokoa ny Fanahy Masina ary mety hahatadidy zavatra adinontsika koa ...
Kristiana maro no milaza fa mifehy Andriamanitra ary manana drafitra ho an'ny fiainantsika. Izay rehetra mitranga amintsika dia ao anatin'io drafitra io. Ny sasany aza dia miady hevitra fa Andriamanitra dia mandahatra antsika mandritra ny andro, ary ao anatin'izany ny zava-tsarotra. Afaka manafaka anao ve io hevitra io fa Andriamanitra dia manomana isa-minitra amin'ny fiainanao ho anao, sa manosotra ny handrinao amin'ny io hevitra io toa ahy? Tsy nomeny safidy malalaka ve isika? Ny ...
Ny fanasana fitafiana dia iray amin'ireo zavatra fantatrao tokony hataonao raha tsy mahazo olon-kafa hanao izany ho anao ianao! Ny akanjo dia tsy maintsy mamolavola - loko mainty misaraka amin'ny fotsy sy ny maivana. Ny akanjo sasany dia tsy maintsy hosasana amin'ny fandaharana malefaka sy ny mpanadio manokana. Azo atao ny mianatra an'io fomba sarotra io satria ny zavatra niainako tany amin'ny oniversite. Napetrako ny vaovao ...
Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana ny hanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary noho izany dia nalefany tany amin'ny sekoly tsy miankina iray izy. Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nandoka tamin'ny ...
Efa tao anatin'ny vahoaka be ianao izay nahatsapa ho kely sy tsy ampy? Sa nipetraka tamin'ny fiaramanidina iray ianao ary nahatsikaritra fa ny olona eny ambony gorodona dia kely toy ny harona? Indraindray aho dia mieritreritra fa eo imason'Andriamanitra dia toy ny valala mihintsan-drà mihintsana amin'ny loto isika. Ao amin'ny Isaia 40,22: 24, dia hoy Andriamanitra: mipetraka eo ambonin'ny faritry ny tany izy, ary ny mponina eo aminy dia tahaka ny valala; namelatra ny lanitra tahaka ...
Rehefa nanomboka nitady fanafody ho an'ny hoditra malefaka dia nolazaina tamiko fa telo amin'ireo marary folo no tsy nandray ny zava-mahadomelina. Tsy nieritreritra mihitsy aho fa azo alaina ho zava-poana ny zava-mahadomelina ary manantena ny iray amin'ireo fito tsara vintana. Tiako kokoa raha tsy nanazava izany tamiko ny dokotera satria nanelingelina ahy izy fa afaka mandany ny fotoanako sy ny volako ary misy voka-dratsiny mahafinaritra ...
Taona vitsy lasa izay, 9 taona ny mpanao hatsikana iray izay nalaza tamin'ny teny mampihomehy1. Daty nahaterahana. Namory ny namany sy ny havany rehetra ny hetsika ary natrehin’ny mpanao gazety. Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin’ny lanonana, ny fanontaniana azo vinaniana sy manan-danja indrindra ho azy dia ny hoe: “ho an’iza na ho an’iza ianao?” Tsy nisalasala ilay mpanao hatsikana namaly hoe: “Mifofofofo! Iza no tsy mitovy hevitra? Afaka nataontsika ...
John Bell dia nanana safidy hanao zavatra izay antenaina tsy ho vitantsika ny ankamaroan'ny hoe: nitazona ny fony teo am-pelatanany izy. Roa taona lasa izay, nandalo fiovam-po izy izay nahomby. Noho ny fandaharana an'ny fo amin'ny fo any amin'ny Bay Medical University any Dallas dia afaka nitazona ny fony izy izay efa niambina azy nandritra ny 70 taona talohan'ny nila nanoloana ...
"Salama, Tammy ny anarako ary" legalista "aho. Nanameloka olona iray tao an-tsaiko tao anatin'ny minitra lasa izay. "Mety ho saika hanontany zavatra mitovitovy amin'ny fivoriana" Antony Mpahay Lalàna tsy fantatra anarana aho "(AL). Hanohy aho ary hanazava ny fomba niantombohan'ny zavatra kely; nihevitra fa manokana aho satria nitandrina ny Lalàn'i Mosesy. Ahoana ny fomba nanombohako ny olona tsy nino toa ny ...
Misy andininy iray misongadina ao amin’ny Testamenta Vaovao izay iresahan’ny apostoly Paoly ny amin’ny hazo fijalian’i Kristy ho fahadalana amin’ny Grika sy fahatafintohinana ho an’ny Jiosy (1 Kor. 1,23). Mora ny mahita ny antony nanaovany io fanambarana io. Raha ny fahitan’ny Grika rahateo, dia fikatsahana niavaka ny haingo sy ny filozofia ary ny fanabeazana. Ahoana no ahafahan'ny voahombo iray hampita fahalalana? Ho an'ny sain'ny Jiosy dia kiakiaka sy ...
Mivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba izy mipetraka lavitra kokoa noho ny olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azon’i Jesosy mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao, toy ny fony ianao taloha…
Tsarovy ny fotoana nampifantohan’Andriamanitra ny sain’i Jeremia ho amin’ny fitoeran’ny mpanefy tanimanga (Jer. 1 Nov.8,2-6)? Nampiasa ny sarin’ny mpanefy tanimanga sy ny tanimanga Andriamanitra mba hampianatra antsika lesona lehibe iray. Hafatra mitovy amin’izany amin’ny fampiasana ny sarin’ny mpanefy tanimanga sy ny tanimanga no hita ao amin’ny Isaia 45,9 sy 64,7 ary koa ao amin’ny Romana 9,20-21. Iray amin'ireo kaopy tiako indrindra, izay ampiasaiko matetika amin'ny dite any amin'ny birao, misy sarin'ny fianakaviako eo amboniny. Raha mijery azy aho...
"Maninona Andriamanitra tsy mamaly ny fivavahako?", Tokony misy antony tsara noho izany hoy aho amin'ny tenako. Angamba tsy nivavaka araka ny sitrapony aho, izay fepetra takian'ny Baiboly amin'ny vavaka novaliana. Angamba mbola manana ota aho teo amin'ny fiainako izay tsy nanenenako. Fantatro fa raha mitandrina an'i Kristy sy ny teniny aho dia ho voavaly kokoa ny fivavahako. Angamba izy ireo misalasala. Mitranga rehefa mivavaka ...